Thwebula Dr.Fone toolkit for iOS 10.2.1.76 – Vessoft
WindowsI-MultimediaIfoniDr.Fone toolkit for iOS
Ikhasi elisemthethweni: Dr.Fone toolkit for iOS
Dr.Fone yamathuluzi ye-iOS – isofthiwe jikelele ukulawula idatha ye-iOS. Isofthiwe iqukethe isethi enkulu amamojuli, ngamunye unesibopho izenzo ezithile ngesikhathi umsebenzi ngedatha kudivayisi. Dr.Fone yamathuluzi ye-iOS kwenza ngokukhetha isipele idatha yedivayisi kukhompyutha yakho bese ukubuyisela oxhumana elahlekile, i-SMS, izithombe noma amanye amafayela kusuka kumadivayisi futhi isipele iTunes noma ICLOUD. Isofthiwe uyakwazi ukulungisa izinkinga ezifana ukuqalisa phansi unomphela, isikrini omhlophe noma i-Apple logo nqabela, ukwehluleka ukuyeka imodi DFU nezinye iziphazamisi ezivamile ohlelweni iOS ngaphandle ezithinta idatha yomsebenzisi. Dr.Fone yamathuluzi ye-iOS ikuvumela ukuba abambe futhi ukurekhoda isihenqo kudivayisi bese ususa wonke noma kukhethwe idatha yomuntu siqu. Futhi isofthiwe uyakwazi alulame umlando ukuxhumana kanye amafayela ananyathiselwe ku Whatsapp, LINE, Kik and Viber.
Yokutakula idatha elahlekile
Elungisa amaphutha ezivamile kulesi simiso-iOS
Ukuthwebula izithombe futhi uqopha i-computer kudivayisi
Ukususwa kwezimiso idatha yomuntu siqu
Yokutakula yomlando ukuxhumana kanye amafayela ananyathiselwe ku izithunywa athandwayo
Thwebula Dr.Fone toolkit for iOS
Amazwana ku Dr.Fone toolkit for iOS
Dr.Fone toolkit for iOS software ehlobene
I-Amazon Kindle – isoftware yakhelwe ukufunda izincwadi ze-Kindle kukhompyutha yakho. Isoftware inemisebenzi edingekayo yokuphatha umtapo wezincwadi we-elekhthronikhi.
Ithuluzi ukuze ihlole computer inethiwekhi. Isofthiwe kwenza ukuskena ngokuzenzakalelayo enethiwekhi zithola idatha kwi computer kuhlobene.